आगमी बजेटः एकल महिला र अपांग भत्ता खारेज, सांसद विकास कोष जिवित ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आगमी बजेटः एकल महिला र अपांग भत्ता खारेज, सांसद विकास कोष जिवित !
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्र धरापमा परेपछि सरकारले एकल महिला र अपांग भएका ब्यक्तिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौति गरेको छ । तर चरम भ्र’ष्टाचार र कानुनसँग बाँझिने सांसद विकास कोष भने आगमी बजेटमा यथावत रहने भएको छ।
६० बर्षमुनीका एकल महिला र अपांगता भएका ब्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका थिए । कतिपय एकल महिला र अपांगता भएका ब्यक्तिलाई यस्तो भत्ताले केही न्याय पनि दिएको थियो । तर सरकारले कोरोना कहर देखाउँदै भत्ता कतौति गरेको छ । आगमी बजेटमा पनि भत्ता कटौति गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
तर स्थानीय तहसँग बाझिनेगरी आउने सांसद विकास कोष यसबर्ष पनि यथावत रहनेछ । अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार प्रत्येक निर्वाचित सांसदहरुलाई ६ करोडका दरले वितरण गर्ने प्रावधानले निरन्तरता पाउनेछ । सांसदहरुलाई दिइने क्षेत्रविकास कोषको स्थानीय तहले पनि निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । तरपनि सरकारले कोरोनाको कहरमा पनि सांसद विकास कोषलार्ई निरन्तरता दिने भएको छ।
कोरोना संंक्रमणपछि तहसनहस भएको अर्थतन्त्र जोगाउन भारत सरकारले सांसद विकास कोष २ बर्षका लागि निलम्बन गरिसकेको छ । जनजनमा विरोध भएपनि नेपाल सरकारले सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिने भएको छ । ‘सांसद विकास कोष सवैभन्दा ठुलो आर्थिक अनिमितताको एक कार्यक्रम हो’, नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने ‘यसलाई निरन्तरता दिनु संघिय कानुनको अलंघन पनि हो।’
अघिल्लो बर्षपनि चौतफी विरोध हुँदा हुँदै सांसद विकास कोष बजेतमा ल्याइएको थियो । अघिल्लो बर्षको सांसद विकास कोष पूर्णरुपमा भने खर्च हुन पाएन । फागुनदेखि नै कोरोनाको त्रास देखिएपछि सांसद विकास कोष पूर्णरुपमा खर्च नभएपनि आंशिकरुपमा भने खर्च भइसकेको छ।